Ampidino WinZip ho an'ny Windows
Maimaimpo Ampidino ho an'ny Windows (0.95 MB)
WinZip, iray aminireo rindrambaiko voalohany tonga ao an-tsaina raha ny momba ny famatrarana rakitra sy ny fandaharana famoahana rakitra tsy azo ihodivirana, dia tsy isalasalana fa iray aminireo programa arisiva be mpampiasa indrindra eto an-tany. Be loatra ka ho anny mpampiasa maro dia misy WinRAR na WinZip.
Ampidino ny WinZip
WinZip; .zip, .rar, .tar, .bz2, .zipx, .7z, .cab, .jar, GZIP (.gz, .taz, .tgz), BZ2 (.bz, .bz2, .tbz, .tbz2) , LHA / LZH (.lha, .lzh), Cabinet (.cab), Disc Image (.img, .iso), Compress (.tz, .z), UUencode (.uu, .uue), XXencode (.xxe )), MIME (.b64, .mim), BinHex (.bhx, .hqx) dia mamela famatrarana rakitra na endrika fisie rakitra. Aminizany fomba izany dia azonao atao ny manangona ireo rakitra sy angon-drakitra aminny solo-sainao aminny fotoana rehetra aminny fomba fanerena samihafa, na afaka mamoaka mora foana ireo angona voatahiry ao aminireo rakitra arisiva ianao.
Miaraka aminireo kinova vaovao, WinZip dia manolotra sehatrasa mora ampiasaina sy mandroso kokoa ho anireo mpampiasa azy, ary afaka ampiasainny mpampiasa solosaina aminny ambaratonga rehetra. WinZip dia manangona endri-javatra mahasoa maro toy ny encryption ireo rakitra arisiva voafintina ho anireo mpampiasa izay te hitazona am-pilaminana ny fisianizy ireo, safidy famatrarana mandroso ho anireo mpampiasa te-hitahiry habe rehefa mandefa mailaka, mpikaroka rakitra mandroso ho anireo mpampiasa izay te hitety mora foana. eo anelanelanny lahatahiry sy ny maro hafa. Iray aminireo rindrambaiko tokony ao anaty solosaina io.
Miaraka aminilay programa, izay misy fanohanana fampidirana ho anny Yahoo !, Gmail, Outlook ary mpanjifa e-mail maro hafa, azonao atao ny mamita mora foana ny famindrana rakitra, ny ariska ary ny fizotra encryption rehefa te handefa mailaka ianao.
Fampisehoana programa WinZip
Manolotra fanohanana ho anny endrika fisie rakitra voafintina rehetra. Aminny tsindry iray monja dia azonao atao ny mamaky zip, zipx, rar, 7z, tar, gzip, vhd, xz ary maro hafa ireo rakitra voafintina misy fanitarana rakitra samihafa ao anatinny segondra.
Manolotra anao ny fiasa rehetra aminny mpitantana rakitra efa mandroso. Azonao atao ny manokatra, manitsy, mandika, mamindra na mizara ny fisie anao rehetra.
Izy io dia miaro ny fiainanao manokana sy ny filaminana. Io dia ahafahanao manafina ireo rakitra tianao rehetra eo am-panaovana arisiva.
Mamela anao hizara rakitra be dia be aminny media sosialy, mailaka, fandefasan-kafatra mailaka ary serivisy rahona aminny famoretana azy ireo.
Noho ny fampidinana MP3 mandroso dia mamela anao hizara rakitra mozika aminny habe kely kokoa izy.
Raha mitady programa haingana, azo antoka ary mora ampiasaina ianao aminny famindrana ny rakitra sy ny famoahana ny famonoana, dia tena mamporisika anao izahay hanandrana WinZip.
* Aorianny fametrahana WinZip dia azonao atao ny manomboka mampiasa ny kinova andrana aminny alàlanny fanindriana ny bokotra Ampiasao ny Evaluation Version.
Haben'ny rakitra: 0.95 MB